“(၇)နှစ်တိုင်တိုင် အသုံးပြုလာတဲ့ Profile Picture ကို အချိန်တစ်ခုစောင့်ပြီး ပြောင်းလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ အေးမြတ်သူ” – Cele Gabar
“(၇)နှစ်တိုင်တိုင် အသုံးပြုလာတဲ့ Profile Picture ကို အချိန်တစ်ခုစောင့်ပြီး ပြောင်းလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ အေးမြတ်သူ”
ပရိသတ်ရဲ့အချစ်တွေကို သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ ပါးချိုင့်မင်းသမီးလေးဖြစ်တဲ့ အေးမြတ်သူကတော့ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော် ပရိသတ်ရဲ့ရင်ထဲမှာ နေရာယူလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မြတ်လေးကတော့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့စိတ်ထားလေးနဲ့ တော်တော်လေး အစွဲအလမ်းကြီးတယ်ဆိုရမှာပါ။ သူဟာ ဖေ့ဘွတ်ခ်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကို (၂၀၁၂ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်)မှာစတင်သုံးစွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီး (၁၁း၄၀) မှာတော့ profile picture ကိုတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ မြတ်လေးကတော့ အဲ့ဒီအချိန်ထဲက အပြောင်းအလဲကြီးကြီးတစ်ခု ကြုံပြီးမှ profileပုံချိန်းမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ဟန်တူပါတယ်။
မြတ်လေးဟာ သူပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာ ဆန်ကာတင်အဖြစ် ခဏခဏပါဝင်ခဲ့ပေမယ့် ယခုနှစ်ကျင်းပခဲ့တဲ့ အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲမှာ “နောင်တွင်ဥဒါန်းတည်စေသတည်း” ဇာတ်ကားနဲ့အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆုကို ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အေးမြတ်သူအတွက်တော့ မြန်မာရုပ်ရှင်လောကမှာမှတ်တိုင်တစ်ခု စိုက်ထူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး သူ့ဘဝအတွက်ကြီးမားတဲ့ အပြောင်းအလဲတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ။
ဒါကြောင့် သူလူမှုကွန်ရက်စသုံးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလ(၈)ည(၁၁း၄၀) အချိန်မှာ Profile ပုံပြောင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းကို “ FB ဆိုတဲ့ လူမှု့ကွန်ယက်ကို ယောင်လည်လည်နဲ့ မသုံးတက်သုံးတက်သုံးလာတာ(၇)နှစ်ပြည့်ပြီ… ပရိုဖိုင်ပုံလေးလည်း မပြောင်းဘဲသုံးလာခဲ့တာ (၇)နှစ်တိတိပြည့်ခဲ့ပြီ….. တခြားသူတွေတော့မသိဘူး ….မမြတ်လေး အတွက် ပရိုဖိုင်ပုံ က ခံစားမှု့တွေ ချစ်ခင်မှု့တွေ အဓိပ္ပါယ်တွေအများကြီး ရှိလို့ ဘာအကြောင်းကြောင့်မှမပြောင်းခဲ့ဘူး…မမြတ်လေး…ဘဝနဲ့ချီတဲ့ပြောင်းလဲမှု့တွေကြုံလာမှ…စသုံးခဲ့တဲ့နေ့ကိုပြန်ရောက်မှ ပြောင်းမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ် ….ဒီနေ့ …ဒီရက်ကလေး ကို ပြန်ရောက်ပြီး ဘဝနဲ့ချီတဲ့ ပြောင်းလဲခြင်းတွေ .. ခက်ခဲခြင်းတွေ…ကြိုးစားခြင်း တွေ… ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေ … အဓိပ္ပါယ်တွေအများကြီးရှိတဲ့ပုံလေး…. ထပ်ချိန်းဖို့ အချိန်ရောက်ခဲ့ပြီ…”လို့ သူရဲ့ဖေ့ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာမှာရေးသားခဲ့ပြီး သူဖေ့ဘွတ်ခ်စသုံးခဲ့တဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့ နိုဝင်ဘာ(၈)ရက် ည(၁၁း၄၀)မှာ Profile Picture ပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
“(၇)ႏွစ္တိုင္တုိင္ အသံုးျပဳလာတဲ့ Profile Picture ကို အခ်ိန္တစ္ခုေစာင့္ျပီး ေျပာင္းလုိက္ျပီျဖစ္တဲ့ ေအးျမတ္သူ”
ပရိသတ္ရဲ႕အခ်စ္ေတြကို သိမ္းပိုက္ထားတဲ့ ပါးခ်ိဳင့္မင္းသမီးေလးျဖစ္တဲ့ ေအးျမတ္သူကေတာ့ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ ပရိသတ္ရဲ႕ရင္ထဲမွာ ေနရာယူလာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ျမတ္ေလးကေတာ့ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့စိတ္ထားေလးနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ေလး အစြဲအလမ္းၾကီးတယ္ဆိုရမွာပါ။ သူဟာ ေဖ့ဘြတ္ခ္လူမွုကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာကို (၂၀၁၂ ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ရက္)မွာစတင္သံုးစြဲခဲ့တာျဖစ္ျပီး (၁၁း၄၀) မွာေတာ့ profile picture ကိုတင္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ျမတ္ေလးကေတာ့ အဲ့ဒီအခ်ိန္ထဲက အေျပာင္းအလဲၾကီးၾကီးတစ္ခု ၾကံဳျပီးမွ profileပံုခ်ိန္းမယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ဟန္တူပါတယ္။
ျမတ္ေလးဟာ သူပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားၾကီးေတြမွာ ဆန္ကာတင္အျဖစ္ ခဏခဏပါ၀င္ခဲ့ေပမယ့္ ယခုႏွစ္က်င္းပခဲ့တဲ့ အကယ္ဒမီဆုေပးပြဲမွာ “ေနာင္တြင္ဥဒါန္းတည္ေစသတည္း” ဇာတ္ကားနဲ႔အေကာင္းဆံုးအမ်ိဳးသမီးဇာတ္ပို႔ဆုကို ရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ေအးျမတ္သူအတြက္ေတာ့ ျမန္မာရုပ္ရွင္ေလာကမွာမွတ္တိုင္တစ္ခု စုိက္ထူႏုိင္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး သူ႔ဘ၀အတြက္ၾကီးမားတဲ့ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုလို႔ဆိုရမွာပါ။
ဒါေၾကာင့္ သူလူမွုကြန္ရက္စသံုးခဲ့တဲ့ ႏို၀င္ဘာလ(၈)ည(၁၁း၄၀) အခ်ိန္မွာ Profile ပံုေျပာင္းခဲ့တဲ့အေၾကာင္းကို “ FB ဆိုတဲ့ လူမႈ႕ကြန္ယက္ကို ေယာင္လည္လည္နဲ႔ မသုံးတက္သုံးတက္သုံးလာတာ(၇)ႏွစ္ျပည့္ၿပီ… ပ႐ိုဖိုင္ပုံေလးလည္း မေျပာင္းဘဲသုံးလာခဲ့တာ (၇)ႏွစ္တိတိျပည့္ခဲ့ၿပီ….. တျခားသူေတြေတာ့မသိဘူး ….မျမတ္ေလး အတြက္ ပ႐ိုဖိုင္ပုံ က ခံစားမႈ႕ေတြ ခ်စ္ခင္မႈ႕ေတြ အဓိပၸါယ္ေတြအမ်ားႀကီး ရွိလို႔ ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္မွမေျပာင္းခဲ့ဘူး…မျမတ္ေလး…ဘဝနဲ႔ခ်ီတဲ့ေျပာင္းလဲမႈ႕ေတြႀကဳံလာမွ…စသုံးခဲ့တဲ့ေန႔ကိုျပန္ေရာက္မွ ေျပာင္းမယ္လို႔ဆုံးျဖတ္ခဲ့တယ္ ….ဒီေန႔ …ဒီရက္ကေလး ကို ျပန္ေရာက္ၿပီး ဘဝနဲ႔ခ်ီတဲ့ ေျပာင္းလဲျခင္းေတြ .. ခက္ခဲျခင္းေတြ…ႀကိဳးစားျခင္း ေတြ… ေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္းေတြ … အဓိပၸါယ္ေတြအမ်ားႀကီးရွိတဲ့ပုံေလး…. ထပ္ခ်ိန္းဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္ခဲ့ၿပီ…”လို႔ သူရဲ႕ေဖ့ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာမွာေရးသားခဲ့ျပီး သူေဖ့ဘြတ္ခ္စသံုးခဲ့တဲ့အခ်ိန္ျဖစ္တဲ့ ႏို၀င္ဘာ(၈)ရက္ ည(၁၁း၄၀)မွာ Profile Picture ေျပာင္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
” ေျမးေလး လြင္ထက္ရဲ႕ (၁)နွစ္ျပည့္ ေမြးေန႕ပြဲအလွဴေလးကို က်င္းပေပးလိုက္တဲ့ ဖိုးဖိုးလြင္မိုး”
“(၆၈)ကြိမ်မြောက် အကယ်ဒမီပေးပွဲကြီး ကျင်းပမယ့် အချိန်နဲ့နေရာ ထွက်ရှိလာ”
“တိမ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ အိုင်ဒေါ Winner မျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူး ဆိုတဲ့ မိတ်ကပ် ဆူး”
အသစ်ထွက်ရှိလာမယ့် ဧဒင် Challenge ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ အကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားမယ်လို့ပရိသတ်ကို ကတိပေးလိုက်တဲ့ ဆောင်းဝတ်ရည်မေ